ShweMinThar: သငျ့ဝနျထမျးကောငျးတှေ မဆုံးရှံးစဖေို့ ဘယျလို လုပျမလဲ ?
လတျတလော လုပျငနျးခှငျမှာ ကွားနရေတာက အရညျအခငျြးရှိတဲ့ ဝနျထမျးတှေ ၊တကယျတျောတဲ့သူတှေ ခဏခဏ ထှကျကွတယျဆိုတာပါပဲ ။
ဘာကွောငျ့ပဲထှကျထှကျ သူတို့ဆီမှာ ရှိနတေဲ့ အရညျအခငျြးက အဖှဲ့အစညျးပျေါ အမှနျတကယျ အကြိုးပွုနိုငျတယျ ဆိုရငျ ကိုယျ့အတှကျ ဆုံးရှံးမှုတော့ရှိတာပါပဲ ။
သူဌေးတှကေတော့ လကျသုံးစကားစကားအနနေဲ့ ငကနျးသေ ငဆှေ လာလိမျ့မယျလို့ သုံးကွတယျ။ ငဆှတှေေ မြားနရေငျ တော့ အဲ့အဖှဲ့အစညျးကလညျး ဆှစေောငျးနယေုံမှ တပါးဘာရှိမှာပါလဲ။
❗လုပျငနျးခှငျထဲမှာ အတျောဆုံးဝနျထမျးတှေ ရှိနတောက ကိုယျ့အတှကျ အကောငျးဆုံးအခွအေနလေို့ ယူဆပါသလား ?
❗ဒါမှမဟုတျယှဉျပွိုငျဖကျတှထေကျ သာလှနျတဲ့ အနအေထား တဈခု ရှိနတေယျလို့ ထငျမွငျမလား ?
တဈခါတဈလေ လူတျောတှကေိုထိနျးခြုပျရတာခကျခဲပါတယျ။ ကိုယျ့အဖှဲ့အစညျးက ကွီးမားတဲ့အနအေထားမှာဆိုရငျ လူတျောတှေ ပိုပွီးလိုအပျပါတယျ။ပိုပွီးလိုအပျလို့ ပိုပွီးရှိလာလလေလေူတျော မြားတဲ့ အဖှဲ့အစညျးက ထိနျးကောငျးရခကျလပေါပဲ။
ဒီနရောမှာ တဈခုတငျပွခငျြတာက လူတျောတိုငျး လူကောငျးဖွဈပါ့မလားဆိုတာ ကိုလညျး တှေးဖို့လိုပါတယျ။တျောတယျ မကောငျးဘူး ၊ကောငျးတယျမတျောဘူး ဆိုတဲ့ စရိုကျပုံစံကှဲပွားခွငျးကို တော့ ကှဲပွားစှာနားလညျ လကျခံထားဖို့လိုပါတယျ။
တျောတဲ့ လူတှကေို ထိနျးသိမျးရတာခကျပါတယျ၊တျောတဲ့ လူပိုမြားတဲ့ အဖှဲ့အစညျးမှာဆိုရငျတော့ ပိုပွီးထိနျးကြောငျးရခကျခဲလာပါတယျ။ဒါကလညျး HR တှအေတှကျ ခေါငျးခဲရတဲ့ ပွသာနာပါ။ တျောတဲ့ လူတှကေို ပြံသနျးခှငျ့ပေးလိုကျခငျြပမေဲ့ တဈခါတဈလေ အစားထိုးရခကျခဲတဲ့ သူတှအေတှကျဆကျပွီးထိနျးသိမျးလိုကျရတာမြိုးလညျး ရှိကွမှာပါ။
ရရှေညျမဟုတျရငျတောငျကာလတဈခုအထိ ထိနျးသိမျးလိုကျခွငျးကလညျး အစားထိုးဖို့အတှကျ အခြိနျကာလ တဈခုရသှားစနေိုငျတာမို့ ပါ။ အဓိက က တဈဦးမှီခို အားထားနရေတဲ့အဖှဲ့အစညျးတှေ ၊ လူတဈစု အပျေါမှာသာ အားကိုးရတဲ့ အခွအေနတှေမှောဆို ရငျ ပိုပွီး ရပျတညျရခကျခဲရပါတယျ ။ လှယျလှယျပွောရရငျ secession Planning ကောငျးကောငျးမရှိတဲ့အခါ သူတို့ ထှကျသှားရငျ တိုငျပတျတာပါပဲ ။
လူတဈယောကျကို ထိနျးသိမျးဖို့က သူရဲ့ လိုအပျခကျြ ၊လိုအငျဆန်ဒ ဒါတှကေို အရငျဆုံးသိရပါမယျ။ ဒါကွောငျ့ တဈဦးခငျြးတဈယောကျခငျြးစီမှာ မတူညီတဲ့ လိုအပျခကျြ ၊လိုအငျဆန်ဒတှကေို ကိုယျက သိအောငျလလေ့ာရပါမယျ၊အကွမျးမဉျြးပွောကွရရငျ
Maslow's hierarchy of needs တှဖွေဈတဲ့
🔹Love and belonging
🔹Self-actualizationတှေ လောကျ တော့
ဒီတော့ လိုခငျြတာကို ဖျောထုတျနိုငျပွီဆိုရငျ ဘာဆကျလုပျရမလဲဆိုတာကို စဉျးစားလို့ ရလာနိုငျပွီဖွဈပါတယျ။ကိုယျက နောကျဆုံးဆုံးဖွတျခကျြခြ ရတဲ့ အနအေထားမဟုတျပဲ Top Management ကို ဆကျလကျတငျပွရမယျဆိုရငျတော့ အဲ့ဒိဝနျထမျးရဲ့ စှမျးဆောငျရညျပိုငျးနဲ့ ဆောငျရှကျခဲ့တဲ့ အောငျမွငျမှုအပိုငျးတှကေို အသေးစိတျမှတျတမျးတငျထားတဲ့ ကိုယျရေးမှတျတမျးမြိုးကို သခြောစှာ ထိနျးသိမျးထားနိုငျဖို့လိုပါတယျ။
နောကျပွီးဝနျထမျးအခငျြးခငျြးရဲ့ သဘောထားမှတျခကျြတှနေဲ့အတူတငျပွထားနိုငျမှ အထကျလူကွီးတှကေ အသိအမှတျပွုနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ဒါဆိုရငျတော့ ဒီဝနျထမျးက အရညျအခငျြးရှိတဲ့သူတကယျတျောတဲ့ လူဆိုတာ သခြောသှားပွီဆိုရငျ သူ့ကိုထိနျးသိမျးဖို့ ဆောငျရှကျတဲ့အခါ ကိုယျ့အတှကျ အထောကျအပံ့ ရရှိနိုငျမှာပါ။
ဝနျထမျးတဈယောကျအလုပျထှကျမယျဆိုရငျ ကနဦး အရငျဆုံးစဉျးစားကွတာက လစာတိုးပေးဖို့ ၊ရာထူးတိုးပေးဖို့ပါပဲ။အခွခေံ အခကျြအလကျအရတော့ မှနျကောငျးမှနျပါလိမျ့မယျ။ဒါပမေဲ့ တိကတြဲ့ အဖွလေားဆိုတာတော့ မဟုတျပါဘူး။လူတိုငျးက လိုခငျြတာခငျြးမတူကွတဲ့ အခွအေနမှော ကိုယျက သူတို့ကို ထိနျးသိမျးနိုငျဖို့ ပါးနပျမှ ရပါလိမျ့မယျ။
တဈခြို့က လစာကိုပိုလိုအပျတယျတဈခြို့က နရော ၊တဈခြို့က လုပျပိုငျခှငျ့ ၊တဈခြို့က ပြျောရှငျဖှယျ မိသားစုဆနျတဲ့ လုပျငနျးခှငျ ၊တဈခြို့ တဈခြို့ တှကွေား မိတျဆှကေကော ဘာလိုခငျြတာလဲ။ဘာတှလေုပျပေးနိုငျမယျထငျသလဲ ဆိုတာတော့ ကိုယျ့ဝနျထမျးအကွောငျး ကိုယျက ပိုသိဖို့လိုပါတယျ။အခွခေံအခကျြအလကျတှဖွေဈတဲ့ လစာ၊ရာထူးကွောငျ့ ဆိုရငျတော့ အထကျက တငျပွခဲ့သလို သူရဲ့ အရညျအခငျြးမှတျတမျးနဲ့အတူသဘောထားမှတျခကျြပွုပွီး Top Managementကိုတငျပေးကွညျ့ပါ။
တကယျလိုအပျကွောငျး အရညျအခငျြးရှိသူဖွဈကွောငျး ယုံကွညျလကျခံလာမယျဆိုရငျတော့ ကိစ်စက ပွတျပွီပေါ့၊အကယျ၍ မရခဲ့ဘူးဆိုရငျတောငျ ကာလတဈခုအတှကျ အာမခံခကျြပေးတာမြိုးကို တောငျးဆိုပွီး အဲ့ဝနျထမျးကို ပွနျလညျ ရှငျးလငျးပေးပါ။ လကျမခံနိုငျခဲ့ရငျတော့ သူ့ဘဝအတှကျ လှတျလပျစှာပြံသနျးနိုငျပါစပေေါ့။
ဆကျပွီးတငျပွခငျြတာက ရာထူးလစာထကျ ၊ပိုပွီးကွီးလေးတဲ့ တာဝနျ လုပျငနျးတှကေိုဆောငျရှကျခငျြတဲ့ ဝနျထမျးမြိုးတှကေိုထိနျးသိမျးရာမှာတော့ သူတို့ တကယျလုပျကိုငျနိုငျလားဆိုတာကို ထညျ့သှငျးစဉျးစားစခေငျြပါတယျ။လူတိုငျးက အသေးအဖှဲလေးတှမေလုပျခငျြကွဘူး။လုပျငနျးမှာ အရေးပါအရာရောကျတဲ့ အပိုငျးတှမှောပဲ ပိုပွီးစိတျဝငျစားတယျ။ဒါဆိုရငျ ဒီအပိုငျးတှကေို တကယျလုပျကိုငျဆောငျရှကျနိုငျပွီလားဆိုတာကို ထညျ့သှငျစဉျးစားရမယျ့ အခွအေနဖွေဈလာပါပွီ။
သူ့ရဲ့ Skill ,Knowledge ,Attitude တှေ ဘယျလောကျထိတိုးတကျနပွေီလဲ ၊ ဒီအဆငျ့တှကေို ကော တကယျဆောငျရှကျနိုငျနပွေီလားဆိုတာကို ကနဦးစဈဆေးမှုတှလေုပျပါ။တကယျတျောရငျလုပျနိုငျရငျ ပေးလုပျလိုကျပါ။အားလုံးမဟုတျတောငျ တဈခြို့တဈဝကျကို လှဲအပျလုပျကိုငျနိုငျဖို့ စဉျးစားပါ။နောကျပွီး တကယျလုပျလာနိုငျရငျလညျး ခြီးမွှငျ့မွှောကျစားမှုပွုပေးပါ။
အကယျ၍မြား လုပျသာ လုပျခငျြစိတျရှိတယျ၊အရညျအခငျြးက အဲလောကျထိ မလုပျနိုငျသေးဘူးဆိုရငျတော့ တှဲဖကျသငျယူမှု ပွုလုပျနိုငျသညျ့အထိလကျတှဲချေါယူနိုငျပါတယျ။အတငျးဇှတျလုပျဖို့ ခညျြးပဲတောငျးဆိုနရေငျတော့ဆကျလကျဆှဲချေါထားဖို့ မသငျ့ပါဘူး။
လုပျငနျးအဖှဲ့အစညျးတိုငျးကတော့တကယျတျောတဲ့လူတှကေိုထိနျးသိမျးထားခငျြကွပါတယျ။အဲလိုထိနျးသိမျးနိုငျဖို့လညျး အစီအမံတှေ ထားရှိကွတယျ။သငျတနျးပေးတတျတာတှေ၊နိုငျငံခွားခရီးစဉျတှေ ၊ငှကွေေး ခြေးဌားမှုတှေ ပွုလုပျပွီးထိနျးသိမျးကွတာရှိသလို စာခြုပျစာတမျးတှနေဲ့လညျး ကာလတဈခုအထိ ထိနျးခြုပျထားတာ ရှိပါတယျ။ဘယျလိုပဲထိနျးသိမျးပါစေ ကိုယျ့အဖှဲ့အစညျးရဲ့ဓလစေ့ရိုကျနဲ့ကိုကျညီတဲ့နညျးလမျးတှကေို အသုံးပွုကွတာမြားပါတယျ။
ဒီတော့ အခွခေံအခကျြအလကျလေး တဈခြို့ကိုပဲတငျပွပါရစေ။
ဝနျထမျးတှအေနနေဲ့မြှျောလငျ့ခကျြကိုယျစီရှိကွမယျ။ကွိုးစားမှုအတိုငျးအတာကိုလိုကျပွီးအခြိနျအပိုငျးအခွားအလိုကျ ရာထူး၊လစာလုပျပိုငျခှငျ့တှေ တိုးမွှငျ့ပေးမယျဆိုရငျ တျောတဲ့လူတှအေနနေဲ့ ပွောငျးရှဖေို့ပွနျပွီးစဉျးစားပါလိမျ့မယျ။အခြိနျကာလကိုတော့သတိထားမိဖို့လိုပါတယျ။ကိုယျက ဘယျအခြိနျမှာ ဒီလိုလုပျပေးဖို့လိုတာလညျးဆိုတာကို ကောငျးစှာနားလညျသဘောပေါကျရငျတော့အကောငျးဆုံးပါ။
✔️စံနှုနျးမြားအထကျမှာ ပေးစဖေို့ လိုပါတယျ
ဒီအခကျြက ငှကွေေးပိုငျးအရေးကွီးလာတဲ့အတှကျ BOD တှခေမြှတျပေးဖို့က အရေးကွီးပါတယျ။ဖွဈခငျြမှလညျး ဖွဈပါလိမျ့မယျ၊ဥပမာယာဉျမောငျးတဈယောကျလစာက (၂)သိနျးထားမယျဆိုပါစို့ Market Rate အရဒီလောကျတော့ရှိမယျဆိုရငျ အနညျးငယျပိုစဖေို့ပွောတာပါ။ဒါပမေဲ့ ဆောငျရှကျဖို့ကွတော့ ငှကွေေးကုနျကမြှုတှရှေိနပွေနျတော့ သခြောတော့ စဉျးစားမှုပွုရပါလိမျ့မယျ။ လစာကောငျးတဲ့ အလုပျကို အရညျအခငျြးရှိတဲ့ ဝနျထမျးတှကေ စုပွုံတိုးကွတာ သဘာဝကပြါတယျ။
ကိုယျက အရညျအခငျြးရှိတဲ့ ဝနျထမျးဆီက ကိုယျ့လုပျငနျးအတှကျ ဘာတှရေနိုငျမလဲ ၊သူ့ရဲ့ ဖွညျ့သှငျးထားတဲ့ အရညျအခငျြးတှကေို ရရှိအောငျ ဆောငျရှကျပွီး ပွနျလညျအသုံးခခြိုငျးဖို့လိုအပျပါတယျ။
✔️ဖနျတီးမှုနဲ့ တီထှငျဆနျးသဈမှုမြားကို အားပအေားမွှောကျပွုပါ
အရညျအခငျြးရှိတဲ့သူတှကေ စိနျချေါမှုအသဈတှေ ၊တီထှငျဆနျးသဈမှုမြားကို လုပျဆောငျနိုငျကွပါတယျ။ဒါကိုဖျောထုတျပါ အားပေးပါ။ ဒီအားသာခကျြက ကိုယျ့အဖှဲ့အစညျးဆီကို အကောငျးဆုံး တိုးတကျမှုတှေ ယူဆောငျလာနိုငျပါတယျ။
✔️ဖျောရှရေငျးနှီးသော ယှဉျပွိုငျမှုမြိုးကို အသုံးပွုပေးပါ
လုပျငနျးခှငျမှာ ဝနျထမျးအခငျြးခငျြးယှဉျပွိုငျလုပျဆောငျနိုငျမှုက အရေးကွီးပါတယျ။ဒါပမေဲ့ တဈခါတဈလမှော အခငျြးခငျြးယှဉျပွိုငျမှုတှကေနေ မလိုမုနျးတီးစိတျတှေ ၊အာဃာတ တရားတှနေဲ့အတူ အခငျြးခငျြးအဆငျမပွမှေုတှဖွေဈပျေါစပွေီး အဖှဲ့အစညျးပါပွိုကှဲတကျပါတယျ။ဒိတော့ ဖျောရှရေငျးနှီးတဲ့ ယှဉျပွိုငျမှုပုံစံမြိုးကို ဖနျတီးပေးဖို့ လိုအပျပါတယျ။
တကယျတော့ လူတျောတှကေို ထိနျးသိမျးဖို့ခကျခဲပါတယျ။နရောထိုငျခငျး ၊လုပျခလစာ ၊ခံစားခှငျ့တှေ ပေးရငျတောငျကနျြးမာရေး ၊မိသားစု အရေး၊တဈခွားလူမှုရေးကိစ်စရပျတှကွေောငျ့လညျးကိုယျဆီက ထှကျခှာသှားတကျပါတယျ။ဒီတော့ ကိုယျက ဘယျလိုထိနျးသိမျးရမလဲဆိုတာကို တော့ကိုယျတိုငျဆုံးဖွတျစခေငျြပါတယျ။
ရေးသားသူ - ထိနျလငျးကြျော(HR)
သင့်ဝန်ထမ်းကောင်းတွေ မဆုံးရှံးစေဖို့ ဘယ်လို လုပ်မလဲ ?
လတ်တလော လုပ်ငန်းခွင်မှာ ကြားနေရတာက အရည်အချင်းရှိတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေ ၊တကယ်တော်တဲ့သူတွေ ခဏခဏ ထွက်ကြတယ်ဆိုတာပါပဲ ။
ဘာကြောင့်ပဲထွက်ထွက် သူတို့ဆီမှာ ရှိနေတဲ့ အရည်အချင်းက အဖွဲ့အစည်းပေါ် အမှန်တကယ် အကျိုးပြုနိုင်တယ် ဆိုရင် ကိုယ့်အတွက် ဆုံးရှံးမှုတော့ရှိတာပါပဲ ။
သူဌေးတွေကတော့ လက်သုံးစကားစကားအနေနဲ့ ငကန်းသေ ငဆွေ လာလိမ့်မယ်လို့ သုံးကြတယ်။ ငဆွေတွေ များနေရင် တော့ အဲ့အဖွဲ့အစည်းကလည်း ဆွေစောင်းနေယုံမှ တပါးဘာရှိမှာပါလဲ။
❗လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ အတော်ဆုံးဝန်ထမ်းတွေ ရှိနေတာက ကိုယ့်အတွက် အကောင်းဆုံးအခြေအနေလို့ ယူဆပါသလား ?
❗ဒါမှမဟုတ်ယှဉ်ပြိုင်ဖက်တွေထက် သာလွန်တဲ့ အနေအထား တစ်ခု ရှိနေတယ်လို့ ထင်မြင်မလား ?
တစ်ခါတစ်လေ လူတော်တွေကိုထိန်းချုပ်ရတာခက်ခဲပါတယ်။ ကိုယ့်အဖွဲ့အစည်းက ကြီးမားတဲ့အနေအထားမှာဆိုရင် လူတော်တွေ ပိုပြီးလိုအပ်ပါတယ်။ပိုပြီးလိုအပ်လို့ ပိုပြီးရှိလာလေလေလူတော် များတဲ့ အဖွဲ့အစည်းက ထိန်းကောင်းရခက်လေပါပဲ။
ဒီနေရာမှာ တစ်ခုတင်ပြချင်တာက လူတော်တိုင်း လူကောင်းဖြစ်ပါ့မလားဆိုတာ ကိုလည်း တွေးဖို့လိုပါတယ်။တော်တယ် မကောင်းဘူး ၊ကောင်းတယ်မတော်ဘူး ဆိုတဲ့ စရိုက်ပုံစံကွဲပြားခြင်းကို တော့ ကွဲပြားစွာနားလည် လက်ခံထားဖို့လိုပါတယ်။
တော်တဲ့ လူတွေကို ထိန်းသိမ်းရတာခက်ပါတယ်၊တော်တဲ့ လူပိုများတဲ့ အဖွဲ့အစည်းမှာဆိုရင်တော့ ပိုပြီးထိန်းကျောင်းရခက်ခဲလာပါတယ်။ဒါကလည်း HR တွေအတွက် ခေါင်းခဲရတဲ့ ပြသာနာပါ။ တော်တဲ့ လူတွေကို ပျံသန်းခွင့်ပေးလိုက်ချင်ပေမဲ့ တစ်ခါတစ်လေ အစားထိုးရခက်ခဲတဲ့ သူတွေအတွက်ဆက်ပြီးထိန်းသိမ်းလိုက်ရတာမျိုးလည်း ရှိကြမှာပါ။
ရေရှည်မဟုတ်ရင်တောင်ကာလတစ်ခုအထိ ထိန်းသိမ်းလိုက်ခြင်းကလည်း အစားထိုးဖို့အတွက် အချိန်ကာလ တစ်ခုရသွားစေနိုင်တာမို့ ပါ။ အဓိက က တစ်ဦးမှီခို အားထားနေရတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေ ၊ လူတစ်စု အပေါ်မှာသာ အားကိုးရတဲ့ အခြေအနေတွေမှာဆို ရင် ပိုပြီး ရပ်တည်ရခက်ခဲရပါတယ် ။ လွယ်လွယ်ပြောရရင် secession Planning ကောင်းကောင်းမရှိတဲ့အခါ သူတို့ ထွက်သွားရင် တိုင်ပတ်တာပါပဲ ။
လူတစ်ယောက်ကို ထိန်းသိမ်းဖို့က သူရဲ့ လိုအပ်ချက် ၊လိုအင်ဆန္ဒ ဒါတွေကို အရင်ဆုံးသိရပါမယ်။ ဒါကြောင့် တစ်ဦးချင်းတစ်ယောက်ချင်းစီမှာ မတူညီတဲ့ လိုအပ်ချက် ၊လိုအင်ဆန္ဒတွေကို ကိုယ်က သိအောင်လေ့လာရပါမယ်၊အကြမ်းမျဉ်းပြောကြရရင်
Maslow's hierarchy of needs တွေဖြစ်တဲ့
🔹Self-actualizationတွေ လောက် တော့
ဒီတော့ လိုချင်တာကို ဖော်ထုတ်နိုင်ပြီဆိုရင် ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာကို စဉ်းစားလို့ ရလာနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်က နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချ ရတဲ့ အနေအထားမဟုတ်ပဲ Top Management ကို ဆက်လက်တင်ပြရမယ်ဆိုရင်တော့ အဲ့ဒိဝန်ထမ်းရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းနဲ့ ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ အောင်မြင်မှုအပိုင်းတွေကို အသေးစိတ်မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းမျိုးကို သေချာစွာ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။
နောက်ပြီးဝန်ထမ်းအချင်းချင်းရဲ့ သဘောထားမှတ်ချက်တွေနဲ့အတူတင်ပြထားနိုင်မှ အထက်လူကြီးတွေက အသိအမှတ်ပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ ဒီဝန်ထမ်းက အရည်အချင်းရှိတဲ့သူတကယ်တော်တဲ့ လူဆိုတာ သေချာသွားပြီဆိုရင် သူ့ကိုထိန်းသိမ်းဖို့ ဆောင်ရွက်တဲ့အခါ ကိုယ့်အတွက် အထောက်အပံ့ ရရှိနိုင်မှာပါ။
ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်အလုပ်ထွက်မယ်ဆိုရင် ကနဦး အရင်ဆုံးစဉ်းစားကြတာက လစာတိုးပေးဖို့ ၊ရာထူးတိုးပေးဖို့ပါပဲ။အခြေခံ အချက်အလက်အရတော့ မှန်ကောင်းမှန်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ တိကျတဲ့ အဖြေလားဆိုတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။လူတိုင်းက လိုချင်တာချင်းမတူကြတဲ့ အခြေအနေမှာ ကိုယ်က သူတို့ကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ ပါးနပ်မှ ရပါလိမ့်မယ်။
တစ်ချို့က လစာကိုပိုလိုအပ်တယ်တစ်ချို့က နေရာ ၊တစ်ချို့က လုပ်ပိုင်ခွင့် ၊တစ်ချို့က ပျော်ရွင်ဖွယ် မိသားစုဆန်တဲ့ လုပ်ငန်းခွင် ၊တစ်ချို့ တစ်ချို့ တွေကြား မိတ်ဆွေကကော ဘာလိုချင်တာလဲ။ဘာတွေလုပ်ပေးနိုင်မယ်ထင်သလဲ ဆိုတာတော့ ကိုယ့်ဝန်ထမ်းအကြောင်း ကိုယ်က ပိုသိဖို့လိုပါတယ်။အခြေခံအချက်အလက်တွေဖြစ်တဲ့ လစာ၊ရာထူးကြောင့် ဆိုရင်တော့ အထက်က တင်ပြခဲ့သလို သူရဲ့ အရည်အချင်းမှတ်တမ်းနဲ့အတူသဘောထားမှတ်ချက်ပြုပြီး Top Managementကိုတင်ပေးကြည့်ပါ။
တကယ်လိုအပ်ကြောင်း အရည်အချင်းရှိသူဖြစ်ကြောင်း ယုံကြည်လက်ခံလာမယ်ဆိုရင်တော့ ကိစ္စက ပြတ်ပြီပေါ့၊အကယ်၍ မရခဲ့ဘူးဆိုရင်တောင် ကာလတစ်ခုအတွက် အာမခံချက်ပေးတာမျိုးကို တောင်းဆိုပြီး အဲ့ဝန်ထမ်းကို ပြန်လည် ရှင်းလင်းပေးပါ။ လက်မခံနိုင်ခဲ့ရင်တော့ သူ့ဘဝအတွက် လွတ်လပ်စွာပျံသန်းနိုင်ပါစေပေါ့။
ဆက်ပြီးတင်ပြချင်တာက ရာထူးလစာထက် ၊ပိုပြီးကြီးလေးတဲ့ တာဝန် လုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ချင်တဲ့ ဝန်ထမ်းမျိုးတွေကိုထိန်းသိမ်းရာမှာတော့ သူတို့ တကယ်လုပ်ကိုင်နိုင်လားဆိုတာကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားစေချင်ပါတယ်။လူတိုင်းက အသေးအဖွဲလေးတွေမလုပ်ချင်ကြဘူး။လုပ်ငန်းမှာ အရေးပါအရာရောက်တဲ့ အပိုင်းတွေမှာပဲ ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားတယ်။ဒါဆိုရင် ဒီအပိုင်းတွေကို တကယ်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီလားဆိုတာကို ထည့်သွင်စဉ်းစားရမယ့် အခြေအနေဖြစ်လာပါပြီ။
သူ့ရဲ့ Skill ,Knowledge ,Attitude တွေ ဘယ်လောက်ထိတိုးတက်နေပြီလဲ ၊ ဒီအဆင့်တွေကို ကော တကယ်ဆောင်ရွက်နိုင်နေပြီလားဆိုတာကို ကနဦးစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ပါ။တကယ်တော်ရင်လုပ်နိုင်ရင် ပေးလုပ်လိုက်ပါ။အားလုံးမဟုတ်တောင် တစ်ချို့တစ်ဝက်ကို လွှဲအပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ စဉ်းစားပါ။နောက်ပြီး တကယ်လုပ်လာနိုင်ရင်လည်း ချီးမြှင့်မြှောက်စားမှုပြုပေးပါ။
အကယ်၍များ လုပ်သာ လုပ်ချင်စိတ်ရှိတယ်၊အရည်အချင်းက အဲလောက်ထိ မလုပ်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်တော့ တွဲဖက်သင်ယူမှု ပြုလုပ်နိုင်သည့်အထိလက်တွဲခေါ်ယူနိုင်ပါတယ်။အတင်းဇွတ်လုပ်ဖို့ ချည်းပဲတောင်းဆိုနေရင်တော့ဆက်လက်ဆွဲခေါ်ထားဖို့ မသင့်ပါဘူး။
လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းတိုင်းကတော့တကယ်တော်တဲ့လူတွေကိုထိန်းသိမ်းထားချင်ကြပါတယ်။အဲလိုထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့လည်း အစီအမံတွေ ထားရှိကြတယ်။သင်တန်းပေးတတ်တာတွေ၊နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်တွေ ၊ငွေကြေး ချေးဌားမှုတွေ ပြုလုပ်ပြီးထိန်းသိမ်းကြတာရှိသလို စာချုပ်စာတမ်းတွေနဲ့လည်း ကာလတစ်ခုအထိ ထိန်းချုပ်ထားတာ ရှိပါတယ်။ဘယ်လိုပဲထိန်းသိမ်းပါစေ ကိုယ့်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ဓလေ့စရိုက်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့နည်းလမ်းတွေကို အသုံးပြုကြတာများပါတယ်။
ဒီတော့ အခြေခံအချက်အလက်လေး တစ်ချို့ကိုပဲတင်ပြပါရစေ။
ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုယ်စီရှိကြမယ်။ကြိုးစားမှုအတိုင်းအတာကိုလိုက်ပြီးအချိန်အပိုင်းအခြားအလိုက် ရာထူး၊လစာလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ တိုးမြှင့်ပေးမယ်ဆိုရင် တော်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ ပြောင်းရွှေ့ဖို့ပြန်ပြီးစဉ်းစားပါလိမ့်မယ်။အချိန်ကာလကိုတော့သတိထားမိဖို့လိုပါတယ်။ကိုယ်က ဘယ်အချိန်မှာ ဒီလိုလုပ်ပေးဖို့လိုတာလည်းဆိုတာကို ကောင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပါ။
✔️စံနှုန်းများအထက်မှာ ပေးစေဖို့ လိုပါတယ်
ဒီအချက်က ငွေကြေးပိုင်းအရေးကြီးလာတဲ့အတွက် BOD တွေချမှတ်ပေးဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ဖြစ်ချင်မှလည်း ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်၊ဥပမာယာဉ်မောင်းတစ်ယောက်လစာက (၂)သိန်းထားမယ်ဆိုပါစို့ Market Rate အရဒီလောက်တော့ရှိမယ်ဆိုရင် အနည်းငယ်ပိုစေဖို့ပြောတာပါ။ဒါပေမဲ့ ဆောင်ရွက်ဖို့ကြတော့ ငွေကြေးကုန်ကျမှုတွေရှိနေပြန်တော့ သေချာတော့ စဉ်းစားမှုပြုရပါလိမ့်မယ်။ လစာကောင်းတဲ့ အလုပ်ကို အရည်အချင်းရှိတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေက စုပြုံတိုးကြတာ သဘာဝကျပါတယ်။
ကိုယ်က အရည်အချင်းရှိတဲ့ ဝန်ထမ်းဆီက ကိုယ့်လုပ်ငန်းအတွက် ဘာတွေရနိုင်မလဲ ၊သူ့ရဲ့ ဖြည့်သွင်းထားတဲ့ အရည်အချင်းတွေကို ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပြီး ပြန်လည်အသုံးချခိုင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
✔️ဖန်တီးမှုနဲ့ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုများကို အားပေအားမြှောက်ပြုပါ
အရည်အချင်းရှိတဲ့သူတွေက စိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေ ၊တီထွင်ဆန်းသစ်မှုများကို လုပ်ဆောင်နိုင်ကြပါတယ်။ဒါကိုဖော်ထုတ်ပါ အားပေးပါ။ ဒီအားသာချက်က ကိုယ့်အဖွဲ့အစည်းဆီကို အကောင်းဆုံး တိုးတက်မှုတွေ ယူဆောင်လာနိုင်ပါတယ်။
✔️ဖော်ရွေရင်းနှီးသော ယှဉ်ပြိုင်မှုမျိုးကို အသုံးပြုပေးပါ
လုပ်ငန်းခွင်မှာ ဝန်ထမ်းအချင်းချင်းယှဉ်ပြိုင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှုက အရေးကြီးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ တစ်ခါတစ်လေမှာ အချင်းချင်းယှဉ်ပြိုင်မှုတွေကနေ မလိုမုန်းတီးစိတ်တွေ ၊အာဃာတ တရားတွေနဲ့အတူ အချင်းချင်းအဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေပြီး အဖွဲ့အစည်းပါပြိုကွဲတက်ပါတယ်။ဒိတော့ ဖော်ရွေရင်းနှီးတဲ့ ယှဉ်ပြိုင်မှုပုံစံမျိုးကို ဖန်တီးပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ လူတော်တွေကို ထိန်းသိမ်းဖို့ခက်ခဲပါတယ်။နေရာထိုင်ခင်း ၊လုပ်ခလစာ ၊ခံစားခွင့်တွေ ပေးရင်တောင်ကျန်းမာရေး ၊မိသားစု အရေး၊တစ်ခြားလူမှုရေးကိစ္စရပ်တွေကြောင့်လည်းကိုယ်ဆီက ထွက်ခွာသွားတက်ပါတယ်။ဒီတော့ ကိုယ်က ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းရမလဲဆိုတာကို တော့ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်စေချင်ပါတယ်။
ရေးသားသူ - ထိန်လင်းကျော်(HR)
Posted by Alex Aung at 3:48 PM